सोया उत्पादन: लाभ र सेम अनाज नोकसान पुग्छ
विवादित अफवाहहरु संस्कृति वरिपरि अस्थायी। एक हात मा, सोया उत्पादन निकाय लाभ ल्याउँछ: कम कोलेस्ट्रल मद्दत गर्छ, प्रोस्टेट, स्तन ओन्कोलजी, osteoporosis रोक्छ, र वजन गुमेको मद्दत गर्छ। यो सिर्फ एक राम्रो प्रचार स्टन्ट व्यापार हो - तर सोया सबै सकारात्मक गुणहरू एक धारणा छ।
धेरै सोया उत्पादनहरु धेरै हानिकारक छन् र अक्सर हर्मोनल असंतुलन निम्त्याउँछ दाबी गर्छन्। र यी सबै भयानक सेम गर्न श्रेय बाली, कल्पनाले पछारिए। यो प्रतियोगिहरु द्वारा सक्रिय आक्रमण, मासु निगमों owning छ कि छाप। त्यसैले सत्य कहाँ छ? बुझ्न प्रयास गर्नुहोस्।
सोया उत्पादन: लाभ वा हानि
साधारण उपभोक्ता यी अफवाहहरु, र विरोधाभास हराएको गर्न धेरै सजिलो छ। यो अद्वितीय र मूल्यवान उपभोग गर्ने विशेष गरी vegans, आवश्यक अझै पनि छ निर्णय उत्पादन प्रोटिन मा धनी। 1995 मा उनले परिणाम को स्पष्ट भए नियमित (दैनिक) को खपत कि नैदानिक परीक्षा सञ्चालन सोया प्रोटिन जनावरहरूलाई संयुक्त हानिकारक कोलेस्ट्रल र ट्राइग्लिसराइड्स को स्तर lowers।
हामीलाई सोया उत्पादनहरु को दीर्घकालीन प्रयोग, यो सम्भव छ यदि 3% द्वारा हृदय रोग को घटना कम गर्न भनेर स्पष्ट तथ्य छ पहिले। सबै सोया उत्पादनहरु रक्त नली र हृदय मा एक लाभदायक प्रभाव छ। तिनीहरूले खनिज, polyunsaturated र साथ मानव शरीर आपूर्ति संतृप्त बोसो, भिटामिन र फाइबर। भटमास - यो एक ठूलो, रातो मासु गर्न वैकल्पिक दृश्य को एक चिकित्सा बिन्दुबाट छ।
थायरयड ग्रंथि मा नकारात्मक प्रभाव
को संरचना थाइरोइड मा एक आक्रामक प्रभाव छ भनेर सोया strumogennye पदार्थ समावेश छ। रोग निरन्तर यी तत्व (बन्दागोभी वा काउली, मुला, गहुँ, सहिजन, rutabaga) जहाँ कुनै आयोडिन एक उच्च सामग्री संग उत्पादनहरु प्रयोग गर्ने मान्छे खतरनाक। तसर्थ, vegetarians आफ्नो आहार बारेमा सावधान खान निश्चित हुनुपर्छ आयोडिन-युक्त उत्पादनहरु वा भिटामिन पूरक guzzle।
ट्रेस तत्व र खनिज को Assimilation
सोया उत्पादन जस्ता, आयोडिन र क्याल्सियम को तीव्र अवशोषण बाधित जो हानिकारक पदार्थ को एक ठूलो रकम समावेश गर्दछ। यी महत्त्वपूर्ण खनिज को कमी को लागि तरिका क्षतिपूर्ति गर्न, आहार ठीक सन्तुलित हुनुपर्छ: फलियां, अनाज, पागल र सुकेको फल समावेश गर्नुहोस्। तपाईं पनि फलाम को पूर्ण अवशोषण गर्न मद्दत गर्छ जो भिटामिन सी, को सेवन एकदम वृद्धि गर्नुपर्छ।
माथिको जानकारी आधारित, हामी हानि र भटमास को लाभ सन्तुलित आहार निर्भर भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं। तपाईं सोया उत्पादनहरु मास्को मा, लगभग कुनै पनि अन्य शहर सुपरमार्केट रूपमा साथै खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। तैपनि, त्यहाँ छन् विशेषता पसलहरूमा यो संस्कृति को कार्यान्वयन लागि।
यो मध्यम खपत (प्रति दिन कुनै 250 भन्दा बढी G) मानिसहरूलाई सुरक्षित छ भनेर सम्झनु पर्छ। पूर्ण यसलाई प्रोटिन र लगभग कुनै बोसो मा धनी छ, किनभने यो बाली त्याग्न यो मूल्य। कम ताप सामग्री आहार मा खपत गर्न सकिन्छ कारण, भइरहेको छैन राम्रो प्राप्त गर्न डर। अनाज, चामल, जई: लीन आहार नकारात्मक स्वास्थ्य, मेनु मस्तिष्क गतिविधि बृद्धि गर्न थप ताजा तरकारी, मशरूम र पागल ल्याउनुहोस् त, उपयोगी अनाज बारे मा भूल छैन असर गर्छ। यी उत्पादनहरु संयोजनमा सोया अप्रिय परिणाम हुनेछैन।
प्रोटिन-युक्त खाद्य पदार्थ
कसरी एक आहार तल bogged गर्न? वजन कम गर्न प्रेरणा
खुबानी: क्यालोरी र लाभदायी गुण
सूप: क्यालोरी, पकाउने व्यञ्जनहरु
कसरी वजन को एक डायरी राख्न? नमूना उचित आहार डायरी। सर्वश्रेष्ठ वजन डायरी
जूनियर सुइट: यो के हो?
सामाजिक नीति: रणनीति, नीति र प्राथमिकता
कसरी सबै अपील गर्नेछ जो महल, देखि कागज बनाउने?
फाबिओ Cannavaro: राष्ट्रिय टोली को क्यारियर र प्रसिद्ध इटालियन फुटबल खेलाडी को इतिहास र पूर्व कप्तान
ट्रयाक र फील्ड एथलेटिक्स, मानक: चलिरहेको (100 मिटर)
होटल Seabel Aladin जर्बा3* (टुनिशिया, जर्बा): समीक्षा, वर्णन, संख्या र समीक्षा
विवाह मा Toasts: मूल हुनुहोस्!
इटाली भिसा लागि कागजातहरू: संग्रह र वितरण क्रम
कम्पनी लोगो संग Lollipops: सफलता अप सानो कुरा बनेको छ
Petr Poroshenko: जीवनी। Petr Poroshenko: परिवार, छोराछोरी